SomaliTalk.com » Waftiga Guddoomiyaha Baarlamaanka ee ka qayb gelaya shirka Nairobi ogolaansho kama haystaan labada gole
Daabaco | Print | Faafin: SomaliTalk.com: Wednesday, April 13, 2011 // 4 Jawaabood
Warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska Ra’iisul wasaaraha DFKMG ayaa sheegay in “Wafdiga hadda ka qeybgalaya shirkaas oo uu hoggaaminayo Guddoomiyaha Baarlamaanka kama heystaan labada gole sharciyadii iyo awoodii matelaadda.” Warsaxaafadeedka hoos ka akhri:
1.	Axdiga Fedraalka KMG ah. Axdiga ayaa si cad u qeexaya in Dowladda FKMG ah, hay’adiisa fulinta ay mas’uul ka tahay siyaasadda iyo dhaqangelinta.
2.	Geedi socodka nabadda Jabuuti waxuu sidoo kale dib u xaqiijineysaa hay’adaha FKMG ah inay yihiin aasaaska wadajirka Soomaaliya, taasoo la doonayo inay beesha caalamku ku dhaqmaan xaalad kasta iyo waqti walba ee geediga nabadda.
4 Jawaabood " Waftiga Guddoomiyaha Baarlamaanka ee ka qayb gelaya shirka Nairobi ogolaansho kama haystaan labada gole "
Thursday, April 14, 2011 at 10:47 pm
Waxay ila tahay Labaatankii sanno ee la soo dhaafay Soomaali maanta maalin ay uga dhawdahay sharaf iyo karaamo ma jirto. Waana iska cadahay kuwa doonaaya somaliya in ay gumaysi ku sii jirto oo kala daad sanaan iyo kala qoqob qolo qolo .
waxaa dhihi lahaa maanta oo kale waxaa haboon in caqliga laga shaqaysiiyo oo qabyaalada laga tago waayo qaran iyo qabiil is ku mid ma aha meelna ma wada galaan. qaramada midoobay waxay doonayaan inay nagu qaabilaan qabiil qabiil . dawladuna waxay ka shaqaynaysaa waliba ragaan hadda jooga meesha in qaranimaddii la soo celiyo. soomalidu waxay ku maah maahdaa (nin xilqaaday eed qaad ) .
waqti aad iyo aad u adag ayaa la marayaa waxaana maanta oo kale loo baahan yahay in dadkeena dhika iyo silica ka dhargay inaan sidii ay uga bixi lahaayeen ku dadaalno ugu yaraan ninwalba wuxuu qaban karo ha qabto. eedaynta aanu iska dayno !!!
Thursday, April 14, 2011 at 7:18 pm
Haddii la yiri dowlada wakhtigeedii waa dhamaan rabaa ee ha laga wada tashado siddii loo diyaarin lahaa doorasho cusub sabab loo diido ma garanaayo . ninkii ku fekera in uu kursiga iska sii haysto meesha wuu ku ceeboobayaa .
Caqligii Teknokaraatka qurbejoogta waan aragnay markaan fursad ha la siiyo aqoon yahanka dalka gudihiisa jooga .
Marki aan u fiirsadey magacyada xildhibaannada shirka Nairobi ka qayb galay marka laga reebo dhawr ka mid ah. inta badan waa raggii magacyadoodu aad uga soomuuqanayay heshiiski badda.
bal qof walboow maxaa kuu muuqanaya soo uma eka in raggii baddu aysan quusan oo mar kale rabaansaxankasiyaasaddainaysoorogtaansi halki ay ugasii wadaan hawshii ay hore u billaabeen ee heshiiska badda iyo heshiisyo kale oo badanba.
Su’aasha kale waxay ahayd miyaan is moodsiiyey mise ergeygi hore ee qaramadamidoobay waxa uu ka mid ahaa adki eedda loo soo jeediyey markaa ergeygaan isnama ku biirey mise waa waxaan anigu iska suureystey.
Wednesday, April 13, 2011 at 3:00 pm
Gole wasiiro meesha ma joogaane qurbahooda ha isaga laabtaan intay nacamleeynta meesha u fadhin lahaayeen.
Golaha Farmaajo Co. Sidaan idiin mootney noqon wayseen ee waxaan idinkula talin lahayn in aad meesha isaga tagtaan oo qoysaskiina idin jooga qurbaha ku laabataan Soomaaliyana Soomalida degan ayaa u tashan!